जनताको होइन, आफ्नै कम्पनीको प्रतिनिधिको रूपमा संसदमा बोल्छन् व्यापारी सांसद « Pahilo News
जनताको होइन, आफ्नै कम्पनीको प्रतिनिधिको रूपमा संसदमा बोल्छन् व्यापारी सांसद
काठमाडौ,१४ साउन । संसद्को अर्थ समितिमा बैंक सञ्चालक : अघिल्लो संसद्मा बैंक सञ्चालक सांसदले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया)को व्यवस्था नै परिवर्तन गरिदिए
अघिल्लो संसद्मा प्रस्तुत भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया)ले बैंक सञ्चालक तथा सिइओको कार्यकाल चार वर्षको हुने र दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा बस्न नमिल्ने प्रस्ताव गरेको थियो । विधेयक संसद्को अर्थ समितिमा पुग्दा सदस्य इच्छाराज तामाङले जनप्रतिनिधिको रूपमा होइन, बैंकको प्रतिनिधिको रूपमा विधेयकको विरोध गरे । तत्कालीन एमालेका सांसद तथा सिभिल बैंकका अध्यक्ष तामाङले सञ्चालक र सिइओको कार्यकालको सीमा तोक्न नहुने तर्क अघि सारे । उनकै प्रयासस्वरूप समितिले सञ्चालक र सिइओको कार्यकाल दुईपटक मात्र हुने व्यवस्था उल्ट्याइदियो । बैंकर सांसदहरूले अन्तिमसम्म लबिङ गर्दागर्दै पनि व्यवस्थापिका–संसद्ले २६ पुस ०७३ मा दुई कार्यकालको व्यवस्थासहित विधेयक पारित गर्‍यो । तर, अर्थसमितिले यस्तो विधेयक पारित भएपछि मिडिया र सर्वसाधारणबीच ठूलो आलोचना भयो । फलस्वरूप संसद्को पूर्ण सदनले विधेयक फेरि समितिमा पठायो । पूर्ण सदनले असहमति जनाएपछि तामाङ पछि हट्न बाध्य भए । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएर लागू पनि हुन थाल्यो ।
श्रम समितिमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी : वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने कम्पनीकी सञ्चालक नै छानबिन गर्ने संसदीय समितिकी सदस्य, प्रतिवेदन नै बनेन
म्यानपावर कम्पनीले कामदारबाट बढी पैसा असुलेको आरोपमा ०७२ मा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा उजुरी प¥यो । समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन थाल्यो । ‘ठगी गर्ने ठुल्ठूला म्यानपावर कम्पनीको लिस्ट बनाएका थियौँ,’ समितिका तत्कालीन सदस्य चूडामणि विक भन्छन् । म्यानपावर व्यवसायी तथा राप्रपाकी सांसद कमलादेवी शर्मा यसै समितिकी सदस्य थिइन् । उनको कम्पनी ‘रिजा ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट प्रालि’ पनि ठगी गर्ने म्यानपावरको सूचीमा परेको थियो । छानबिनका लागि बनाइएको उपसमितिमा समेत शर्मा पुगिन् । त्यसैले उपसमितिले प्रतिवेदन नै तयार पार्न सकेन । यो छानबिन रोक्न तत्कालीन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले पनि जोडबल लगाए । म्यानपावर व्यवसायीसमेत रहेका गुरुङले समितिको अध्ययन सुरु नहुँदै म्यानपावरले कामदारबाट शुल्क लिन नपाउने नियम लागू गरिदिए । त्यसपछि विवादको विषयान्तर भयो र छानबिन फितलो हुन पुग्यो ।
०७४ मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक छलफलका लागि महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमा पुगेको थियो । जसमा दुई सय ७६ संशोधन परे । समितिले संशोधन प्रस्ताव राखेका सांसदहरूलाई बोलाएर छलफल गर्‍यो । मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका सांसदहरू जनस्वास्थ्यको गुणस्तर होइन, आफ्नो लगानीको सुरक्षाको विषयमा बढी चिन्तित भए । समितिमै रहेका र मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका राजेन्द्र पाण्डे, वंशीधर मिश्रहरू ‘उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने’ भन्ने व्यवस्थालाई खारेजै गर्नुपर्ने पक्षमा बोले । चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विवाद त्योभन्दा पनि पुरानो हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले थप कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भन्दै नेपाल सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग सहमति गरेपछि सांसद तथा मेडिकल कलेज सञ्चालक पाण्डेले १२ फागुन ०७० मा संसद्मा त्यसको कडा आलोचना गरे । निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिए संसद् भवनअगाडि नै अनशन बस्ने चेतावनी उनले दिए । त्यस्तै, १३ पुस ०७१ मा समितिको बैठकमा सांसद वंशीधर मिश्रले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा गोविन्द केसी बाधक रहेको भन्दै खरो आलोचना गरे । बैठकपछि पनि उनले पत्रकारहरूसँग भने, ‘अर्बौं लगानी गरेर संरचना बनाएको हुन्छ । सम्बन्धन नदिने रे । एउटा पागल डाक्टर जसले राष्ट्रघात गरिरहेको छ, त्योचाहिँ देशको हिरो ? राष्ट्रको हित गर्न खोज्ने मान्छे हामीचाहिँ पीडा पोखेर बस्नुपरेको छ ।’
१. विकास समितिमा ठेकेदार
हरिनारायणप्रसाद रौनियार (संघीय समाजवादी फोरम)– पप्पु कन्स्ट्रक्सन (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघिसम्म पप्पु कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष थिए । सांसदमा निर्वाचित भएपछि अध्यक्ष पद छाडेर छोरालाई जिम्मा दिएका हुन् ।)
स्वार्थअनुकूल कानुन बनाउन लबिङ
सांसद मोतीलाल दुगड, टिएम दुगड ग्रुपका अध्यक्ष हुन् । उनी संसद्को महत्वपूर्ण समिति ‘अर्थ समिति’का सदस्य छन् । अटोमोबाइल, बैंक, वित्तीय संस्था, पेय पदार्थ जुसलगायत क्षेत्रमा दुगडको लगानी छ । उनी सन्राइज बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत छन् । दुगडलाई नेकपाले आफ्नो समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाएको हो । उद्योगी उपेन्द्र महतोकी बहिनी जुलीकुमारी महतो पनि अर्थ समितिमै छिन् ।
संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिलाई पनि व्यापारी÷व्यवसायीको खाँचो थिएन । तर, अनिल कुमार रुँगटा, पवनकुमार शारडा, महेन्द्र शेरचन, राज्यलक्ष्मी गोल्छाजस्ता व्यवसायीहरू यही समितिमा बसेर ऐन/कानुन निर्माणमा खटिए ।
शिक्षालाई सहज, सुलभ बनाउने भन्दै ०२८ सालको पुरानो ऐन संशोधन गरेर ०७३ जेठमा संसद्बाट शिक्षा ऐन पारित भयो । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा छलफलका लागि पुगेको यो विधेयकमा शिक्षालाई सहकारीअन्तर्गत मात्र चलाउने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव केही सांसदले राखेका थिए । त्यसो गर्दा विद्यार्थीलाई आर्थिक भार कम हुन्थ्यो । तर, समितिमा निजी विद्यालयमा लगानी गरेका सांसदहरू पनि भएकाले उनीहरूले यसको विरोध गरे । सहकारी वा गुठीमार्फत मात्रै निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्थाको विरोध गर्दै विधेयक रोक्न सांसदहरू उमेश श्रेष्ठ र बाबुराम पोखरेलले खुबै कसरत गरे । पछि, व्यवस्थापिक–संसद्बाट पारित शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन) २०७३ ले हाल सञ्चालित विद्यालयलाई यथावतै राखी नयाँ दर्ता हुने शैक्षिक संस्था गुठीअन्तर्गत दर्ता हुने प्रावधान राख्यो ।
१२ भदौ ०७५ मा ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भयो । मौलिक हकअन्तर्गत आएको यो विधेयक छलफलका लागि ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य’ समितिमा पुगेको थियो । निजी लगानीका स्कुलहरू १५ वर्षपछि गैरनाफामूलक बन्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव समितिमा आयो । प्रस्ताव सुनेर स्कुल–कलेजमा लगानी गरेका केही सांसद झोँक्किए । बैठकमै चर्काचर्की पर्‍यो । त्यसरी झोँक्किनेमध्ये एक थिए, सांसद नारायण मरासिनी । स्याङ्जामा स्कुल सञ्चालन गरेका मरासिनीलाई शैक्षिक संस्थाहरू गैरनाफामूलक बन्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव किन मन पथ्र्यो ? गैरनाफामूलक बनाउने भनेपछि त विद्यार्थीबाट बढी पैसा असुल्न नपाइने भइयो । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका सांसद उमेश श्रेष्ठ पनि समितिमै थिए । उनले भने, ‘विधेयकमै नभएको विषयमा नजाऔँ । बरु विधेयक छिटो टुंग्याऔँ ।’ पछि, ऐन आउँदा निजी लगानीका विद्यालयलाई सेवामूलक र लोककल्याणकारी बनाउने त भनियो, तर कसरी र कहिलेदेखि भन्नेबारे उल्लेख गरिएन ।
१७ पुस ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ले म्यानपावरहरूको धरौटी बढाउने प्रस्ताव ग¥यो । वार्षिक पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थाले एक करोड नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी तथा वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत पत्र माग गर्ने संस्थाले दुई करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा थियो । तर, विधेयक प्रमाणीकरण हुँदा वार्षिक ३ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजतपत्र माग गर्ने संस्थासँग धरौटीस्वरूप ५० लाख रुपैयाँ नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यस्तै, वार्षिक तीन हजारभन्दा माथि र पाँच हजारसम्म कामदार पठाउनेहरूसँग धरौटीबापत एक करोड नगद र तीन करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी, वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजतपत्र माग गर्ने संस्थासँग धरौटीबापत दुई करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी लिई इजाजतपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । धरौटी रकम नबढाउन म्यानपावर व्यवसायी सांसदहरूले खुबै लबिङ गरे । त्यसमध्ये एक थिए, एलपी सावाँ । विधेयकलाई आफू सदस्य रहेको ‘उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समिति’मा लैजानुपर्छ भन्दै सावाँले ठूलै कसरत पनि गरे । तर, विधेयक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पुग्यो । आफ्नो समितिमा विधेयक लैजान सफल नभए पनि कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा सावाँलगायत म्यानपावर व्यवसायी सांसदहरूले बलियो लबिङ गरेको समाचार बाहिरियो । आफ्नो समितिमा मात्र होइन, समितिबाहिर गएर पनि आफ्नो स्वार्थसँग जोडिएका विधेयकलाई सांसदहरूले प्रभावित बनाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण हो यो ।नयाँपत्रिकावाट